Ngo-2010, kwenzeka into ekhethekileyo e-Iceland. Ngoku, unokuzibuza ukuba kutheni siqala iqela malunga ne-German comedy ne-Iceland, kodwa siya kufikelela kuloo nto. Ngoko, ngoJuni ka-2010, umculi we-Icelandic nomlobi uJón Gnarr wamangaliswa waba ngumbongameli wenkulu-dolophu yelizwe, uReykjavik. Ukubaluleka kokhetho lwakhe kuyacaca xa usichaza, ukuba i-third-thirds yabantu baseIceland bahlala eReykjavik.
Okuthakazelisayo ngokwaneleyo, uGnarr wayephumelele kwiminyaka emine njengomagosa. Unokuba ngumzekelo obalaseleyo kumculi wezopolitiko zaseYurophu, kodwa ngokuqinisekileyo akayena kuphela. Ngokukodwa ukuxhatshazwa kwezimali ka-2008 kubonakala kubangele ukusabela ngokubanzi koluntu kwiindlela ezinobungcali kwezombusazwe.
EItali, iBeppe Grillo "i-Movimento 5 Stelle (i-Star Star Movement)" yaxubha inkundla yezopolitiko kumazwe ngamazwe. Kwamanye ukhetho lwengingqi ngo-2010, iqela le-comedian likwazi ukuqokelela ukuya kuma-20 ekhulwini lamavoti - kwithuba elithile laba liqela lesibini elithandwa kakhulu e-Italy.
Nangona uphumelele kakhulu, kukho into efanayo eJamani. Kubizwa ngokuba yi "Die Partei (IQela)" kwaye lihlala lihlala libala onke amanye amaqela kunye nezopolitiko. Kwaye ukususela ngo-2014, yenza njalo kwizinga laseYurophu.
I-Satire engaxhamliyo kunye nezoPolitiki ezisebenzayo
Mhlawumbi ngaphambi kwexesha layo, "Die Partei" yasungulwa nguMartin Sonneborn nabanye ngo-2004.
Emva koko, uSonneborn wayengumhleli-oyintloko kumagazini waseJamani obaluleke kakhulu, i-"Titanic". Kwakungesilo lokuqala lokungenelela kwabasebenzi bamaphephancwadi ukhetho okanye ezinye iinkqubo zezopolitiko. Ukususela ngo-2004, le nxaxheba ithathe inxaxheba kwiinkalo ezininzi zonxweme, urhulumente kunye noluntu. Akuzange kube naluphi uphumelelo oluphawulekayo, kodwa rhoqo wenza i-ruckus kunye nama-parodies "oqhelekileyo" kwezopolitiko kunye namaqela.
Kwezinye iidolophu, "i-Die Partei" yaqesha abahlaziyi be-campaigns abaye baziwayo, okwenzeka ngoko-media. Ngokukodwa kumajelo asekuhlaleni, iqela likwazi ukuqwalasela ngokusebenzisa izivakalisi ezihlekisayo ezifana ne-"Conquering Content!".
Nangona iinjongo zokunciphisa umxholo (ukucaca ngokucacileyo kokungabikho komxholo kumkhankaso wokhetho lwamaphepha-posters), iqela linenkqubo yeentlobo. Iqukethe iimfuno ezifana nokubeka iChansela Angela Merkel eMpuma Jamani nakumaziko azungeze ukwakha olunye udonga phakathi kweMpuma neNtshona Jamani kunye nezinye iindonga, umz. Ezinye iindawo zenkqubo yeqela ziquka imfuno yokulwa nelizwe laseLiechtenstein. Ngalolu hlelo "Die Partei" liye lafumana u-0,2 ekhulwini lamavoti kunyaka-2013. Kodwa ukuba ubulungiselele, iqela elixhatshazelisayo alimangaleli nje kwezopolitiko. Ngaphezulu nangamazwi akhe abukhali, ihlalutya ngokufanelekileyo iinkqubo zepolitiki nezithethe ezithintela inkqubela phambili.
Kukhetho luka-2014 lwePalamente yaseYurophu, "iParti Partei" yaphumelela ukunqoba okumangalisayo. Ngokwenene yaphumelela ukuphumelela isihlalo esisodwa eBrussels, isebenza ngesiqubulo esithi "Ewe eYurophu, Cha kwiYurophu".
Oku kuthetha ukuba umphathi weqela uMartin Sonneborn kwafuneka athathe i-ofisi kwiPalamente yaseYurophu. Ngoku uhlala eBrussels phakathi kwamaqela azimeleyo, engekho enye yeengxenyana ezinkulu, oku kuthetha ukuba ngoku ujikelezwe ngamanye amaqela, njengoluphiko olufanelekileyo lwezombusazwe we-French Marine Le Pen. Ukongezelela, uSonneborn ufumana intlawulo yomsebenzi wakhe epalamente kunye nabasebenzi kunye nokufikelela kwi-carpool ye-parliament. Ngaphambi kokhetho lwango-2014, wayememezele ukuba uya kuzama ukuziyeka emva kwenyanga, eshiya isikhundla sakhe sokuba ngumzukeli we "Die Partei", oya kwenza into efanayo, ngoko amalungu amaninzi eqela angakufumana inzuzo ebambe isihlalo kwi-EU-iPalamente. Nangona kunjalo, kwavela ukuba imigaqo yepalamente ayizange ivumele le nkqubo kwaye ngoko uMartin Sonneborn kufuneka ahlale eBrussels ixesha elipheleleyo lomthetho wakhe.
Ngoku uchitha ixesha lakhe ephalamende, ngokugqithiseleyo ukukhathazeka njengoko wayezitshilo ngokwakhe. Emva koko akasayi kwiiseshoni ngokuqhelekileyo, enye enye indlela yokucaphukisa abapolitiki baseYurophu abasele. Ngexesha elizeleyo, uNyananeborn ubandakanyeka kwi-shishini yezopolitiko, nangona kunjalo. Emva kwenkqutyana engqongileyo ye-EU-iPalamente ibonakalise izicwangciso zokuxosha aba babini beqela le-Jikelele laseJalimane le-AFD, ngoku kutshanje wakhupha i-press release, evakalisa ukuba akayi kwamkela abapolitiki ababini abachitha idumela leqela leendiza ukuba uyinxalenye.
Iifrimu zaseJamani ezilungileyo kakhulu kubafundi baseJamani
Isikhokelo soQalelo kwi-Economics
IsiSigama iSigama seSicwangciso kunye neeApeports
Ziziphi iifilimu ezilungileyo kakhulu zikaRobert Downey Jr.?